vivo V21丨vivo Myanmar
4 good reasons for vivo V21
for vivo V21
44MP Ultra Definition Front Camera သင့်မျက်တောင်လေးများကိုပင် ကြည်လင်ပြတ်သားစွာ မြင်တွေ့နိုင်ပြီး သင့်ရဲ့ ဆယ်ဖီ
အလှပုံလေးတွေမှာ အသေးစိတ်ကျမှုတွေကတော့ တကယ့်ကို အံ့သြမင်သက်ရလောက်အောင်ပါပဲ။ စွဲဆောင်မှုရှိလွန်းတဲ့ သင့်ရဲ့
အလှအပအားသာချက်လေးတွေကလည်း ချုံ့ချဲ့ကြည့်တာနဲ့ ထင်သာမြင်သာ ရှိနေမှာပါ။
44MP Ultra Definition Front Camera သင့်မျက်တောင်လေးများကိုပင် ကြည်လင်ပြတ်သားစွာ မြင်တွေ့နိုင်ပြီး သင့်ရဲ့ ဆယ်ဖီအလှပုံလေးတွေ
မှာ အသေးစိတ်ကျမှုတွေကတော့ တကယ့်ကို အံ့သြမင်သက်ရလောက်အောင်ပါပဲ။ စွဲဆောင်မှုရှိလွန်းတဲ့ သင့်ရဲ့ အလှအပအားသာချက်လေးတွေက
လည်း ချုံ့ချဲ့ကြည့်တာနဲ့ ထင်သာမြင်သာ ရှိနေမှာပါ။
44MP Ultra Definition Front Camera သင့်မျက်တောင်လေးများကိုပင် ကြည်လင်ပြတ်သားစွာ မြင်တွေ့နိုင်ပြီး သင့်ရဲ့ ဆယ်ဖီအလှပုံလေးတွေမှာ အသေးစိတ်ကျမှုတွေကတော့ တကယ့်ကို အံ့သြမင်သက်ရလောက်အောင်ပါပဲ။ စွဲဆောင်မှုရှိလွန်းတဲ့ သင့်ရဲ့ အလှအပအားသာချက်လေးတွေကလည်း ချုံ့ချဲ့ကြည့်တာနဲ့ ထင်သာမြင်သာ ရှိနေမှာပါ။
ဘယ်လိုပုံစံ၊ ဘယ်လိုအကွာအဝေးကမဆို Auto Focus နှင့်ဆို အားလုံးရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုကို ခံရမှာ အသေအချာပါပဲ။
ရှေ့ကင်မရာရှိ ထူးခြားသော Dual Selfie Spotlight သည်
အလင်းရောင်အားနည်းသော အခြေအနေမျိုးတွင် ရိုက်ယူထား
သော ဆယ်ဖီများကို အဆင့်မြှင့်ရန် အထူးသီးသန့်ပြုလု
ပ်ထားသည်။ ထပ်မံထည့်သွင်းပေးထားသော glow
အလင်းရောင်သည်လည်း သင့်မျက်နှာလေးကို ပိုမိုရှင်းလင်း
တောက်ပစေပြီး ပို၍ ဆွဲဆောင်မှုရှိအောင် ပံ့ပိုးပေးပါသည်။
ရှေ့ကင်မရာရှိ ထူးခြားသော Dual Selfie Spotlight သည် အလင်းရောင်အားနည်းသော အခြေအနေမျိုးတွင် ရိုက်ယူထားသော ဆယ်ဖီများကို အဆင့်မြှင့်ရန် အထူးသီးသန့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ထပ်မံထည့်သွင်းပေးထားသော glow အလင်းရောင်သည်လည်း သင့်မျက်နှာလေးကို ပိုမိုရှင်းလင်းတောက်ပစေပြီး ပို၍ ဆွဲဆောင်မှုရှိအောင် ပံ့ပိုးပေးပါသည်။
သင့်ရဲ့ ဇာတ်လမ်းကို ပိုမိုတောက်ပသော၊ ပိုမိုကြည်လင်မှုရှိသော ဗီဒီယိုများနဲ့ ဖော်ပြလိုက်ပါ။ Dual Selfie
Spotlight ဟာ အမှောင်ထူထူအချိန်တွေမှာ ဆယ်ဖီဗီဒီယိုတွေ ရိုက်ကူးဖို့အတွက် သင်လိုအပ်နေတဲ့
သင့်ရဲ့ ဇာတ်လမ်းကို ပိုမိုတောက်ပသော၊ ပိုမိုကြည်လင်မှုရှိသော ဗီဒီယိုများနဲ့ ဖော်ပြလိုက်ပါ။ Dual Selfie Spotlight
ဟာ အမှောင်ထူထူအချိန်တွေမှာ ဆယ်ဖီဗီဒီယိုတွေ ရိုက်ကူးဖို့အတွက် သင်လိုအပ်နေတဲ့ အလင်းရောင်လေးပါပဲ။
သင့်ရဲ့ ဇာတ်လမ်းကို ပိုမိုတောက်ပသော၊ ပိုမိုကြည်လင်မှုရှိသော ဗီဒီယိုများနဲ့ ဖော်ပြလိုက်ပါ။ Dual Selfie Spotlight ဟာ အမှောင်ထူထူအချိန်တွေမှာ ဆယ်ဖီဗီဒီယိုတွေ ရိုက်ကူးဖို့အတွက် သင်လိုအပ်နေတဲ့ အလင်းရောင်လေးပါပဲ။
ဈေးကွက်ကိုဉီးဆောင်သော ISOCELL Plus 2G နည်းပညာသည် အလင်းသိပ်သည်းမှု၏ ကန့်သတ်ချက်များကို တွန်းအားဖြစ်စေသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ အသစ်ဖြစ်သော AI Night Portrait algorithm သည် ညအချိန်အခါတွင် ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ အာရုံစူးစိုက်မှုကို ရရှိစေရန်
သေချာစေသည်။ OIS Super Night Selfie နှင့် multi-frame denoising တို့သည် ကြည်လင်ပြတ်သားမှုရှိသော အလင်းအမှောင်
မှန်ကန်တိကျမှုကို ထူးခြားစွာ ဖမ်းယူရိုက်ကူးပေးနိုင်ပြီး သင့်မျက်နှာလေးနှင့် ညသဘာဝအလှကို အသေးစိတ်ကျကျ ထင်းလင်းတောက်ပ
ဈေးကွက်ကိုဉီးဆောင်သော ISOCELL Plus 2G နည်းပညာသည် အလင်းသိပ်သည်းမှု၏ ကန့်သတ်ချက်များကို တွန်းအားဖြစ်စေသည်။ ကျွန်ုပ်
တို့၏ အသစ်ဖြစ်သော AI Night Portrait algorithm သည် ညအချိန်အခါတွင် ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ အာရုံစူးစိုက်မှုကို ရရှိစေရန် သေချာစေသည်။ OIS
Super Night Selfie နှင့် multi-frame denoising တို့သည် ကြည်လင်ပြတ်သားမှုရှိသော အလင်းအမှောင် မှန်ကန်တိကျမှုကို ထူးခြားစွာ ဖမ်းယူ
ရိုက်ကူးပေးနိုင်ပြီး သင့်မျက်နှာလေးနှင့် ညသဘာဝအလှကို အသေးစိတ်ကျကျ ထင်းလင်းတောက်ပစေမည် ဖြစ်သည်။
ဈေးကွက်ကိုဉီးဆောင်သော ISOCELL Plus 2G နည်းပညာသည် အလင်းသိပ်သည်းမှု၏ ကန့်သတ်ချက်များကို တွန်းအားဖြစ်စေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ အသစ်ဖြစ်သော AI Night Portrait algorithm သည် ညအချိန်အခါတွင် ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ အာရုံစူးစိုက်မှုကို ရရှိစေရန် သေချာစေသည်။ OIS Super Night Selfie နှင့် multi-frame denoising တို့သည် ကြည်လင်ပြတ်သားမှုရှိသော အလင်းအမှောင် မှန်ကန်တိကျမှုကို ထူးခြားစွာ ဖမ်းယူရိုက်ကူးပေးနိုင်ပြီး သင့်မျက်နှာလေးနှင့် ညသဘာဝအလှကို အသေးစိတ်ကျကျ ထင်းလင်းတောက်ပစေမည် ဖြစ်သည်။
အလားတူပင် ကင်မရာမှန်ဘီလူးပေါ်တွင် အသုံးပြုသော OIS နည်းပညာနှင့် EIS algorithm သည် သင့် ဆယ်ဖီဗီဒီယိုများကို ယုံကြည်မှု
အပြည့်နဲ့ လှပခန့်ညားနေစေမည် ဖြစ်သည်။ လမ်းလျှောက်ပါ၊ စကားစမြည်ပြောပါ၊ မှတ်တမ်းတင် ဗီဒီယိုများ ရိုက်ကူးလိုက်ပါ _
အားလုံးကို ငြိမ်သက်မှုအရှိဆုံးဖြစ်အောင် ဖန်တီးပေးထားပါသည်။
အလားတူပင် ကင်မရာမှန်ဘီလူးပေါ်တွင် အသုံးပြုသော OIS နည်းပညာနှင့် EIS algorithm သည် သင့် ဆယ်ဖီဗီဒီယိုများကို ယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့
လှပခန့်ညားနေစေမည် ဖြစ်သည်။ လမ်းလျှောက်ပါ၊ စကားစမြည်ပြောပါ၊ မှတ်တမ်းတင် ဗီဒီယိုများ ရိုက်ကူးလိုက်ပါ _ အားလုံးကို ငြိမ်သက်မှုအရှိ
အလားတူပင် ကင်မရာမှန်ဘီလူးပေါ်တွင် အသုံးပြုသော OIS နည်းပညာနှင့် EIS algorithm သည် သင့် ဆယ်ဖီဗီဒီယိုများကို ယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ လှပခန့်ညားနေစေမည် ဖြစ်သည်။ လမ်းလျှောက်ပါ၊ စကားစမြည်ပြောပါ၊ မှတ်တမ်းတင် ဗီဒီယိုများ ရိုက်ကူးလိုက်ပါ _ အားလုံးကို ငြိမ်သက်မှုအရှိဆုံးဖြစ်အောင် ဖန်တီးပေးထားပါသည်။
ဒါရိုက်တာရဲ့ကုလားထိုင်မှာ ထိုင်ပြီး ရှေ့နဲ့နော
က်ကင်မရာများကို တချိန်တည်း လှည့်လိုက်ပါ။ထပ်တိုး
လုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့ဆိုတော့ သင့်ဗီဒီယိုတွေက ပိုပြီး
က်ကင်မရာများကို တချိန်တည်း လှည့်လိုက်ပါ။
က ပိုပြီး ပျော်စရာကောင်းပြီပေါ့။
ဒါရိုက်တာရဲ့ကုလားထိုင်မှာ ထိုင်ပြီး ရှေ့နဲ့နောက်ကင်မရာများကို တချိန်တည်း
လှည့်လိုက်ပါ။ထပ်တိုးလုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့ဆိုတော့ သင့်ဗီဒီယိုတွေက ပိုပြီး ပျော်စရာကောင်းပြီပေါ့။
ရုပ်ထွက်ကြည်လင်မှု အမြင့်စား 4K selfie ဗီဒီယိုတွေကို ဖန်တီးနိုင်တဲ့ စွမ်းအားနဲ့ သင့်ဘ၀၏ ဒါရိုက်တာအဖြစ် ရပ်တည်လိုက်ပါ။
vivo ၏ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဓာတ်ပုံများတွင် ကျွမ်းကျင်မှုကို ဆောင်ယူလာပါက ရင်သပ်ရှုမောဖွ
ယ်ကောင်းသော ဓာတ်ပုံများကို ရိုက်ကူးရန်အတွက် နောက်ထပ် စွမ်းဆောင်ချက် နှစ်မျိုးကို ရနိုင်သည်။
င်ရာ အထူးပြုလုပ်ချက်များသည် ကလေး
ဘဝကို အပေါ့ပါးဆုံး ပျော်ရွှင်စေသည်။
သင်ဟာ ပိုမိုသဘာဝကျပြီး စတိုင်ကျတဲ့
အသွင်အပြင်အတွက် သင့်ခေါင်းကို သေး
အတွက် အဖွဲ့လိုက်ဆယ်ဖီတွေမှာ ရှေ့ထွ
အသွင်အပြင်အတွက် သင့်ခေါင်းကို သေးင
vivo ၏ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဓာတ်ပုံများတွင် ကျွမ်းကျင်မှုကို ဆောင်ယူလာပါက ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းသော ဓာတ်ပုံများကို ရိုက်ကူးရန်အတွက် နောက်ထပ် စွမ်းဆောင်ချက် နှစ်မျိုးကို ရနိုင်သည်။
ကလေးများအတွက် အထူးမျက်နှာပိုင်းဆိုင်ရာ အထူးပြုလုပ်ချက်များသည် ကလေးဘဝကို အပေါ့ပါးဆုံး ပျော်ရွှင်စေသည်။
သင်ဟာ ပိုမိုသဘာဝကျပြီး စတိုင်ကျတဲ့အသွင်အပြင်အတွက် သင့်ခေါင်းကို သေးငယ်အောင်ပြုလုပ်ရိုက်ကူးပေးနိုင်တဲ့အတွက် အဖွဲ့လိုက်ဆယ်ဖီတွေမှာ ရှေ့ထွက်ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ ကြောက်နေစရာမလိုတော့ပါဘူး။
2.5D မျက်နှာပြင်အကွေးများဖြင့် V21 သည် ၇.၂၉ မီလီမီ
တာ အထူသာရှိသည်။ ၎င်းသည် သင်အမြဲမျှော်လင့်စောင့်စား
ခဲ့ရသည့် ငှက်မွှေးလေးလို ပေါ့ပါးမှုရှိသော ဖုန်းပင် ဖြစ်သည် ။
တာ အထူသာရှိသည်။ ၎င်းသည် သင်အမြဲမျှော်လ
င့်စောင့်စားခဲ့ရသည့် ငှက်မွှေးလေးလို ပေါ့ပါးမှုရှိသော ဖုန်း
ပင် ဖြစ်သည် ။
ဘေးဘောင်တွင် ရိုးရှင်းဖြောင့်တန်းသော လိုင်းများပါရှိ
ပြီး သင့်ဖုန်းကို ခေတ်မှီပြီး ခမ်းနားသွားစေသည်။ ၎င်း
သည် အနုပညာစက်မှုဒီဇိုင်း၏ စံပြအတိုင်းပင်
ဘေးဘောင်တွင် ရိုးရှင်းဖြောင့်တန်းသော လိုင်းများပါရှိပြီး
သင့်ဖုန်းကို ခေတ်မှီပြီး ခမ်းနားသွားစေသည်။ ၎င်းသည်
အနုပညာစက်မှုဒီဇိုင်း၏ စံပြအတိုင်းပင် ဖြစ်သည်။
2.5D မျက်နှာပြင်အကွေးများဖြင့် V21 သည် ၇.၂၉ မီလီမီတာ အထူသာရှိသည်။ ၎င်းသည် သင်အမြဲမျှော်လင့်စောင့်စားခဲ့ရသည့် ငှက်မွှေးလေးလို ပေါ့ပါးမှုရှိသော ဖုန်းပင် ဖြစ်သည် ။
ဘေးဘောင်တွင် ရိုးရှင်းဖြောင့်တန်းသော လိုင်းများပါရှိပြီး သင့်ဖုန်းကို ခေတ်မှီပြီး ခမ်းနားသွားစေသည်။ ၎င်းသည် အနုပညာစက်မှုဒီဇိုင်း၏ စံပြအတိုင်းပင် ဖြစ်သည်။
AG Matte Glass ကာဗာ သည် သင့်လက်ချောင်းများကို သက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေသည့်ဇိမ်ခံပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ခြစ်ရာများကို ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း၊ လျှောကျခြင်းများကို ကာကွယ်ခြင်းအပြင် လက်ဗွေများဖြင့်လည်း အလွယ်တကူ လက်ရာထင်မည် မဟုတ်ပါ။
AG Matte Glass ကာဗာ သည် သင့်လက်ချောင်းများကို သက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေသည့်ဇိမ်ခံပစ္စည်းတစ်ခု
ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ခြစ်ရာများကို ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း၊ လျှောကျခြင်းများကို ကာကွယ်ခြင်းအပြင် လက်ဗွေများဖြ
င့်လည်း အလွယ်တကူ လက်ရာထင်မည် မဟုတ်ပါ။
သင့်ဘဝ၏ အစိတ်အပိုင်းအားလုံးဆီကို သက်ဝင်စွာ လှုပ်ရှားလှပနေသာ အရောင်မျိုးစုံကို ဖြန့်ကြဲလိုက်ပါ။
သဘာဝတရား၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံအတိုင်း သင့်တစ်နေ့တာ၏ အခိုက်အတန့်လေးကို အလှဆင်လိုက်သလို
တိတ်ဆိတ်စွာရွေ့လျားနေသော တိမ်တိုက်များကို နောက်ခံထားလျက် တောက်ပနေ
သည့် နေမင်းကြီးသည် သမုဒ္ဒရာကြီးနှင့် တွေ့ဆုံရန် နိမ့်ဆင်းသွားလျက်ရှိသည်။
တိတ်ဆိတ်စွာရွေ့လျားနေသော တိမ်တိုက်များကို နောက်ခံထားလျက် တောက်ပနေသည့်
နေမင်းကြီးသည် သမုဒ္ဒရာကြီးနှင့် တွေ့ဆုံရန် နိမ့်ဆင်းသွားလျက်ရှိသည်။
အနက်ရောင်နှင့် အပြာအရောင်များသည် နှောနေပြီး ကောင်းကင်၌ ကခုန်နေစ
ဉ်တယောသည် ဘဝသံစဉ်များကို တီးခတ်နေသည်။
အနက်ရောင်နှင့် အပြာအရောင်များသည် နှောနေပြီး ကောင်းကင်၌ ကခုန်နေစဉ်တယောသည်
သင့်ဘဝ၏ အစိတ်အပိုင်းအားလုံးဆီကို သက်ဝင်စွာ လှုပ်ရှားလှပနေသာ အရောင်မျိုးစုံကို ဖြန့်ကြဲလိုက်ပါ။ သဘာဝတရား၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံအတိုင်း သင့်တစ်နေ့တာ၏ အခိုက်အတန့်လေးကို အလှဆင်လိုက်သလိုပေါ့။
တိတ်ဆိတ်စွာရွေ့လျားနေသော တိမ်တိုက်များကို နောက်ခံထားလျက် တောက်ပနေသည့် နေမင်းကြီးသည် သမုဒ္ဒရာကြီးနှင့် တွေ့ဆုံရန် နိမ့်ဆင်းသွားလျက်ရှိသည်။
အနက်ရောင်နှင့် အပြာအရောင်များသည် နှောနေပြီး ကောင်းကင်၌ ကခုန်နေစဉ်တယောသည် ဘဝသံစဉ်များကို တီးခတ်နေသည်။
CFO နည်းပညာကျေးဇူးနှင့် အောက်ခြေ bezel သည် အလွန်ကျဉ်းမြောင်းသောကြောင့်
သင်၏ မျက်နှာပြင်သည် ယခုအခါ ပို၍ ကြီးမားလာသည်။
CFO နည်းပညာကျေးဇူးနှင့် အောက်ခြေ bezel သည် အလွန်ကျဉ်းမြောင်းသောကြောင့် သင်၏ မျက်နှာပြင်သည် ယခုအခါ ပို၍ ကြီးမားလာသည်။
အသစ်ဖြစ်သော Dual-Tone Step သည်
၎င်းသည် သင့်မျက်ဝန်းများအတွက် ကောင်း
သော၊ သန့်ရှင်းသော အလွှာတစ်ခုပင်
က်ကင်မရာများသည် မည်မျှသပ်ရပ်စွာ လိုက်ဖ
က်မှုရှိနေသည်ကို သတိထားကြည့်ပါ၊ ၎င်းသည်
က်ပိုသော၊ စနစ်တကျဖွဲ့စည်းထားသော၊ သန့်ရှင်း
သော အလွှာတစ်ခုပင် ဖြစ်သည်။
အသစ်ဖြစ်သော Dual-Tone Step သည် အနုပညာလက်ရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ နောက်ကင်မရာများသည် မည်မျှသပ်ရပ်စွာ လိုက်ဖက်မှုရှိနေသည်ကို သတိထားကြည့်ပါ၊ ၎င်းသည် သင့်မျက်ဝန်းများအတွက် ကောင်းသည်ထက်ပိုသော၊ စနစ်တကျဖွဲ့စည်းထားသော၊ သန့်ရှင်းသော အလွှာတစ်ခုပင် ဖြစ်သည်။
အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည့် 64MP နှင့် OIS တပ်ဆင်ထားသော အဓိကအနောက်ဘက်ကင်မရာသည် အကောင်းဆုံး ရိုက်ကူးမှုအတွေ့အကြုံ
များအတွက် သေချာသော ဧရိယာနေရာတစ်ခုဖြစ်ပြီး ပြီးပြည့်စုံစွာ လှပသော ပုံရိပ်များကို နေ့နေ့၊ ညည အလွယ်တကူ ရိုက်ကူးနိုင်စေ
မည် ဖြစ်သည်။ မြင်ကွင်းကျယ်ပုံများမှစ အနုစိတ်ပုံရိပ်များအထိ သင့်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် အနုပညာအစွမ်းအစများကို ဖော်ပြလိုက်ပါ။
အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည့် 64MP နှင့် OIS တပ်ဆင်ထားသော အဓိကအနောက်ဘက်ကင်မရာသည် အကောင်းဆုံး ရိုက်ကူးမှုအတွေ့အကြုံများအတွက်
သေချာသော ဧရိယာနေရာတစ်ခုဖြစ်ပြီး ပြီးပြည့်စုံစွာ လှပသော ပုံရိပ်များကို နေ့နေ့၊ ညည အလွယ်တကူ ရိုက်ကူးနိုင်စေမည် ဖြစ်သည်။
မြင်ကွင်းကျယ်ပုံများမှစ အနုစိတ်ပုံရိပ်များအထိ သင့်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် အနုပညာအစွမ်းအစများကို ဖော်ပြလိုက်ပါ။
အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည့် 64MP နှင့် OIS တပ်ဆင်ထားသော အဓိကအနောက်ဘက်ကင်မရာသည် အကောင်းဆုံး ရိုက်ကူးမှုအတွေ့အကြုံများအတွက် သေချာသော ဧရိယာနေရာတစ်ခုဖြစ်ပြီး ပြီးပြည့်စုံစွာ လှပသော ပုံရိပ်များကို နေ့နေ့၊ ညည အလွယ်တကူ ရိုက်ကူးနိုင်စေမည် ဖြစ်သည်။ မြင်ကွင်းကျယ်ပုံများမှစ အနုစိတ်ပုံရိပ်များအထိ သင့်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် အနုပညာအစွမ်းအစများကို ဖော်ပြလိုက်ပါ။
သင်၏ဖုန်းဖြင့် လှုပ်ရှားမှုများကို တိတိကျကျတွက်ချက်ခြင်းအားဖြင့် ကင်မရာရှိ OIS နည်းပညာသည် မည်သည့်ကင်မရာတုန်ခါမှုမဆို
မပေးနိုင်သည့် မှန်ဘီလူးကို ဆန့်ကျင်ဘက်လမ်းကြောင်းသို့ ရွေ့လျားစေသည်။ ထို့အပြင် တည်ငြိမ်မှုဆိုင်ရာ algorithm တစ်ခုသည်
frame တိုင်းတွင် ပြည့်စုံခြင်းနှင့် ရှင်းလင်းခြင်းတို့အတွက် တွန်းအားပေးသည်။ ထို့ကြောင့် V21 သည် သင်၏ pro vlog ထုတ်လုပ်မှု
အဖွဲ့နှင့်အတူ အရာအားလုံးကို ရိုက်ကူးနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
သင်၏ဖုန်းဖြင့် လှုပ်ရှားမှုများကို တိတိကျကျတွက်ချက်ခြင်းအားဖြင့် ကင်မရာရှိ OIS နည်းပညာသည် မည်သည့်ကင်မရာတုန်ခါမှုမဆို မပေးနို
င်သည့် မှန်ဘီလူးကို ဆန့်ကျင်ဘက်လမ်းကြောင်းသို့ ရွေ့လျားစေသည်။ ထို့အပြင် တည်ငြိမ်မှုဆိုင်ရာ algorithm တစ်ခုသည် frame တိုင်းတွင်
ပြည့်စုံခြင်းနှင့် ရှင်းလင်းခြင်းတို့အတွက် တွန်းအားပေးသည်။ ထို့ကြောင့် V21 သည် သင်၏ pro vlog ထုတ်လုပ်မှုအဖွဲ့နှင့်အတူ အရာအားလုံးကို ရို
သင်၏ဖုန်းဖြင့် လှုပ်ရှားမှုများကို တိတိကျကျတွက်ချက်ခြင်းအားဖြင့် ကင်မရာရှိ OIS နည်းပညာသည် မည်သည့်ကင်မရာတုန်ခါမှုမဆို မပေးနိုင်သည့် မှန်ဘီလူးကို ဆန့်ကျင်ဘက်လမ်းကြောင်းသို့ ရွေ့လျားစေသည်။ ထို့အပြင် တည်ငြိမ်မှုဆိုင်ရာ algorithm တစ်ခုသည် frame တိုင်းတွင် ပြည့်စုံခြင်းနှင့် ရှင်းလင်းခြင်းတို့အတွက် တွန်းအားပေးသည်။ ထို့ကြောင့် V21 သည် သင်၏ pro vlog ထုတ်လုပ်မှုအဖွဲ့နှင့်အတူ အရာအားလုံးကို ရိုက်ကူးနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
ပုံနှစ်ပုံကို တစ်ခုတည်းမှာ? ၎င်းသည် အထင်ကြီးစရာ လှည့်ကွက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ ယခုအခါ သင်လည်း လုပ်ဆော
င်နိုင်ပြီ ဖြစ်သည်။ သင့်ရဲ့ တီထွင်ဖန်တီးမှုကိုဖော်ထုတ်ပြီး အိပ်မက်ဆန်တဲ့ အနုပညာလက်ရာများရဲ့ ဆရာတစ်ဆူ
ပုံနှစ်ပုံကို တစ်ခုတည်းမှာ? ၎င်းသည် အထင်ကြီးစရာ လှည့်ကွက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ ယခုအခါ သင်လည်း လုပ်ဆောင်နိုင်ပြီ
ဖြစ်သည်။ သင့်ရဲ့ တီထွင်ဖန်တီးမှုကိုဖော်ထုတ်ပြီး အိပ်မက်ဆန်တဲ့ အနုပညာလက်ရာများရဲ့ ဆရာတစ်ဆူအဖြစ် ရပ်တည်လို
ပုံနှစ်ပုံကို တစ်ခုတည်းမှာ? ၎င်းသည် အထင်ကြီးစရာ လှည့်ကွက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ ယခုအခါ သင်လည်း လုပ်ဆောင်နိုင်ပြီ ဖြစ်သည်။ သင့်ရဲ့ တီထွင်ဖန်တီးမှုကိုဖော်ထုတ်ပြီး အိပ်မက်ဆန်တဲ့ အနုပညာလက်ရာများရဲ့ ဆရာတစ်ဆူအဖြစ် ရပ်တည်လိုက်ပါ။
၆.၄၄ လက်မ E3 AMOLED မျက်နှာပြင်တွင် FHD + resolution နှင့် 100% P3 အရောင်အကျယ်သည် မတူကွဲပြား ထူးခြားသော
အရောင်များကို ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပါသေးသည်။ SGS Eye Care Display Certification ၏ ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားသော ပိုင်ရှင်အနေဖြင့်
၎င်းသည်သင်၏မျက်လုံးများအား အပြာရောင်အလင်း၏ ထိခိုက်ပျက်စီးမှုမှလည်း လျှော့ချပေးစေသည်။
၆.၄၄ လက်မ E3 AMOLED မျက်နှာပြင်တွင် FHD + resolution နှင့် 100% P3 အရောင်အကျယ်သည် မတူကွဲပြား ထူးခြားသော အရောင်များ
ကို ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပါသေးသည်။ SGS Eye Care Display Certification ၏ ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားသော ပိုင်ရှင်အနေဖြင့် ၎င်းသည်သင်၏မျက်လုံး
များအား အပြာရောင်အလင်း၏ ထိခိုက်ပျက်စီးမှုမှလည်း လျှော့ချပေးစေသည်။
၆.၄၄ လက်မ E3 AMOLED မျက်နှာပြင်တွင် FHD + resolution နှင့် 100% P3 အရောင်အကျယ်သည် မတူကွဲပြား ထူးခြားသော အရောင်များကို ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပါသေးသည်။
SGS Eye Care Display Certification ၏ ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားသော ပိုင်ရှင်အနေဖြင့် ၎င်းသည်သင်၏မျက်လုံးများအား အပြာရောင်အလင်း၏ ထိခိုက်ပျက်စီးမှုမှလည်း လျှော့ချပေးစေသည်။
မြင့်မားသော refresh နှုန်း 90 Hz နှုန်းဖြင့် မျက်နှာပြင်သည် ချောမွေ့သောအတွေ့အကြုံကို ပေးစွမ်းပေး
နိုင်ပြီး အနှောက်အယှက်ကင်းသော မြင်ကွင်းခံစားမှုရသကိုလည်း ရရှိစေမည်ဖြစ်သည်။
မြင့်မားသော refresh နှုန်း 90 Hz နှုန်းဖြင့် မျက်နှာပြင်သည် ချောမွေ့သောအတွေ့အကြုံကို ပေးစွမ်းပေးနိုင်ပြီး
အနှောက်အယှက်ကင်းသော မြင်ကွင်းခံစားမှုရသကိုလည်း ရရှိစေမည်ဖြစ်သည်။
မြင့်မားသော refresh နှုန်း 90 Hz နှုန်းဖြင့် မျက်နှာပြင်သည် ချောမွေ့သောအတွေ့အကြုံကို ပေးစွမ်းပေးနိုင်ပြီး အနှောက်အယှက်ကင်းသော မြင်ကွင်းခံစားမှုရသကိုလည်း ရရှိစေမည်ဖြစ်သည်။
7nm octa-core MTK 800U ပရိုဆက်ဆာသည် အမြန်နှုန်း 2.4 GHz အထိ အလုပ်လုပ်ပေးနိုင်သည်။ ၎င်း
သည် အက်ပလီကေးရှင်းများကို စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်း ဖွင့်သကဲ့သို့ ထူးခြားစွာ ချောမွေ့သော
အတွေ့အကြုံကို ပေးစွမ်းနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
7nm octa-core MTK 800U ပရိုဆက်ဆာသည် အမြန်နှုန်း 2.4 GHz အထိ အလုပ်လုပ်ပေးနိုင်သည်။
၎င်းသည် အက်ပလီကေးရှင်းများကို စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်း ဖွင့်သကဲ့သို့ ထူးခြားစွာ ချောမွေ့သော အတွေ့အကြုံ
ကို ပေးစွမ်းနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
The Speed You
7nm octa-core MTK 800U ပရိုဆက်ဆာသည် အမြန်နှုန်း 2.4 GHz အထိ အလုပ်လုပ်ပေးနိုင်သည်။ ၎င်းသည် အက်ပလီကေးရှင်းများကို စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်း ဖွင့်သကဲ့သို့ ထူးခြားစွာ ချောမွေ့သော အတွေ့အကြုံကို ပေးစွမ်းနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
Extended RAM နည်းပညာဖြင့် 8GB ဖုန်းသည် RAM အတွက် 3GB ပြင်ပမှတ်ဉာဏ်နေရာကိုထိပုတ်နိုင်သည်။ အက်ပလီ
ကေးရှင်းများကို ပိုမိုမြန်ဆန်စွာလည်ပတ်နိုင်ခြင်း၏ လွတ်လပ်မှုကိုခံစားလိုက်ပါ။
၎င်းသည် UFS 2.2 ကို အထောက်အပံ့ပေးသည်။ ၎င်းသည် V20 ရှိ ယခင်မျိုးဆက်နည်းပညာများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် ဖတ်ရှုနှုန်းမှာ
၁၁၀% ပိုမိုမြန်ဆန်ပြီး ၉၅% ပိုမိုမြန်ဆန်သော ရေးသားနှုန်းကို ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်သည်။ ဓာတ်ခွဲခန်းပတ်ဝန်းကျင်တွင် စမ်းသပ်မှုအရ
အကြီးစားအက်ပလီကေးရှင်းများ (ဂိမ်းများ) ကို မြန်ဆန်စွာတပ်ဆင်ခြင်းသည် ၁၀% ပိုမိုမြန်ဆန်ပြီး 8GB ရှိ ဖိုင်တစ်ခုကို ကူးဖို့ရာလည်း
၂၀% အထိ အချိန်သက်သာစေမည်ဖြစ်သည်။
၎င်းသည် UFS 2.2 ကို အထောက်အပံ့ပေးသည်။ ၎င်းသည် V20 ရှိ ယခင်မျိုးဆက်နည်းပညာများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် ဖတ်ရှုနှုန်းမှာ ၁၁၀% ပိုမို
မြန်ဆန်ပြီး ၉၅% ပိုမိုမြန်ဆန်သော ရေးသားနှုန်းကို ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်သည်။ ဓာတ်ခွဲခန်းပတ်ဝန်းကျင်တွင် စမ်းသပ်မှုအရ အကြီးစားအက်ပလီကေး
ရှင်းများ (ဂိမ်းများ) ကို မြန်ဆန်စွာတပ်ဆင်ခြင်းသည် ၁၀% ပိုမိုမြန်ဆန်ပြီး 8GB ရှိ ဖိုင်တစ်ခုကို ကူးဖို့ရာလည်း ၂၀% အထိ အချိန်သက်သာစေမ
Extended RAM နည်းပညာဖြင့် 8GB ဖုန်းသည် RAM အတွက် 3GB ပြင်ပမှတ်ဉာဏ်နေရာကိုထိပုတ်နိုင်သည်။ အက်ပလီကေးရှင်းများကို ပိုမိုမြန်ဆန်စွာလည်ပတ်နိုင်ခြင်း၏ လွတ်လပ်မှုကိုခံစားလိုက်ပါ။
၎င်းသည် UFS 2.2 ကို အထောက်အပံ့ပေးသည်။ ၎င်းသည် V20 ရှိ ယခင်မျိုးဆက်နည်းပညာများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် ဖတ်ရှုနှုန်းမှာ ၁၁၀% ပိုမိုမြန်ဆန်ပြီး ၉၅% ပိုမိုမြန်ဆန်သော ရေးသားနှုန်းကို ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်သည်။ ဓာတ်ခွဲခန်းပတ်ဝန်းကျင်တွင် စမ်းသပ်မှုအရ အကြီးစားအက်ပလီကေးရှင်းများ (ဂိမ်းများ) ကို မြန်ဆန်စွာတပ်ဆင်ခြင်းသည် ၁၀% ပိုမိုမြန်ဆန်ပြီး 8GB ရှိ ဖိုင်တစ်ခုကို ကူးဖို့ရာလည်း ၂၀% အထိ အချိန်သက်သာစေမည်ဖြစ်သည်။
Funtouch OS 11.1 သည် ထူးခြားဆန်းသစ်သော
ပုံသဏ္ဍာန်များကို ကြည့်ရှုခံစားနိုင်သည့် icon
အသစ်များကို တွေ့ရပြီး နောက်ထပ်တစ်ဆင့်မြင့်သော
မျက်စိပသာဒဖြစ်ဖွယ် ခံစားမှုမျိုးကို ပေးစွမ်းနိုင်မည်
၎င်းသည် သာလွန်ထူးခြားပြီး စွမ်းအားပြည့် vivo ဖုန်း
ကျွန်ုပ်တို့၏ ခရီးစဉ်တွင် ခိုင်မာသော ခြေလှမ်းတစ်ခု
ရိုးရှင်းလွယ်ကူပြီး ကျစ်လစ်မှုရှိသည့်အားလျော်စွာ Funtouch
OS 11.1 သည် ထူးခြားဆန်းသစ်သော ပုံသဏ္ဍာန်များကို ကြည့်ရှု
ခံစားနိုင်သည့် icon အသစ်များကို တွေ့ရပြီး နောက်ထပ်တစ်ဆ
င့်မြင့်သော မျက်စိပသာဒဖြစ်ဖွယ် ခံစားမှုမျိုးကို ပေးစွမ်းနိုင်မည်
၎င်းသည် သာလွန်ထူးခြားပြီး စွမ်းအားပြည့် vivo ဖုန်းသုံးစွဲမှု
အတွေ့အကြုံကို တည်ဆောက်ရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ ခရီးစ
ဉ်တွင် ခိုင်မာသော ခြေလှမ်းတစ်ခုပင်ဖြစ်သည်။
ရိုးရှင်းလွယ်ကူပြီး ကျစ်လစ်မှုရှိသည့်အားလျော်စွာ Funtouch OS 11.1 သည် ထူးခြားဆန်းသစ်သော ပုံသဏ္ဍာန်များကို ကြည့်ရှုခံစားနိုင်သည့် icon အသစ်များကို တွေ့ရပြီး နောက်ထပ်တစ်ဆင့်မြင့်သော မျက်စိပသာဒဖြစ်ဖွယ် ခံစားမှုမျိုးကို ပေးစွမ်းနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
၎င်းသည် သာလွန်ထူးခြားပြီး စွမ်းအားပြည့် vivo ဖုန်းသုံးစွဲမှုအတွေ့အကြုံကို တည်ဆောက်ရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ ခရီးစဉ်တွင် ခိုင်မာသော ခြေလှမ်းတစ်ခုပင်ဖြစ်သည်။
1 ။ 44MP ပင်မကင်မရာကို အသုံးပြုသည့်အခါ 44MP ဓာတ်ပုံရလဒ်များသည် ၁၆:၁၁ ဖရိန်အတွင်းသာ ရရှိနိုင်ပါသည်။
2 ။ ဖုန်း၏တိုင်းတာနိုင်သည့်အထူတွင် ကင်မရာဖြာထွက်မှု မပါဝင်ပါ။ V21 Sunset Dazzle နှင့် Arctic White ဗားရှင်း၏ ကိုယ်ထည်အထူနှင့် အလေးချိန်မှာ ၇.၃၉ မီလီမီတာနှင့် ၁၇၇ ဂရမ်ဖြစ်သည်။ V21 Dusk Blue သည် ၇.၂၉ မီလီမီတာ အထူနှင့် ၁၇၆ ဂရမ်အလေးချိန်ရှိသည်။ အမှန်တကယ် အတိုင်းအတာနှင့်အလေးချိန်သည် လုပ်ငန်းစဉ်များ၊ တိုင်းတာသည့်နည်းလမ်းနှင့် ပစ္စည်းထောက်ပံ့ပစ္စည်းများကွဲပြားမှုကြောင့် မတူညီမှုများရှိနိုင်သည်။ ကျေးဇူးပြု၍ အမှန်တကယ်ထုတ်ကုန်ကို ရည်ညွှန်းပေးပါ။
3 ။ နောက် အထူးမြင်ကွင်းကျယ် ကင်မရာသည် ပုံပျက်ခြင်းများကို မှန်ကန်စေပြီးနောက် မှန်ဘီလူးထောင့် ၁၂၀ ဒီဂရီ (သို့) ၁၀၈ ဒီဂရီ ရှိသည်။
4 ။ ထောင့်ဖြတ်တိုင်းတာပါက ထောင့်မှန်အတိုင်း အပြည့်အ၀ မျက်နှာပြင် အရွယ်အစားမှာ ၆.၄၄ လက်မရှိသည်။ အမှန်တကယ် display area သည် အနည်းငယ်သေးငယ်သည်။
5 ။ ပုံမှန်အားဖြင့် screen refresh rate သည် 60Hz ဖြစ်သည်။ သင်သည် စနစ်ချိန်ညှိချက်များတွင် Smart Switch, 60Hz သို့မဟုတ် 90Hz mode များအကြား ရွေးချယ်နိုင်သည်။ မတူညီသော အက်ပလီကေးရှင်းများ (သို့မဟုတ်) ဂိမ်းမျက်နှာပြင်များတွင် မျက်နှာပြင်ပြန်လည်နှုန်းနှင့်တုံ့ပြန်မှုနှုန်းသည် အနည်းငယ်ကွဲပြားနိုင်သည်။ အချို့သော အက်ပလီကေးရှင်းများ (သို့မဟုတ်) ဂိမ်းမျက်နှာပြင်များသည် လိုက်ဖက်မှုကဲ့သို့သော အကြောင်းပြချက်များကြောင့် 60Hz သာ ထောက်ပံ့နိုင်သည်။
6 ။ အမှန်တကယ်ရရှိနိုင်သော RAM / ROM သည် လည်ပတ်မှုစနစ်နှင့် ကြိုတင်ထည့်သွင်းထားသော အက်ပ်များ၏ သိုလှောင်မှုကြောင့် လျော့နည်းသည်။
7 ။ အချက်အလက်များအားလုံးသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ နည်းပညာဒီဇိုင်းသတ်မှတ်ချက်များ၊ ဓာတ်ခွဲခန်းစစ်ဆေးမှုရလဒ်နှင့်ထောက်ပံ့ပစ္စည်း ပေးသွင်းသူများ၏ အချက်အလက်များအပေါ်အခြေခံသည်။ အမှန်တကယ်စွမ်းဆောင်ရည်သည် ဆော့ဝဲဗားရှင်း၊ တိကျသောစမ်းသပ်မှုပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ဖုန်းမော်ဒယ်ပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။ ဤစာမျက်နှာတွင် ဖောပြထားသော နှိုင်းယှဉ်မှုများအားလုံးသည် vivo ထုတ်ကုန်များကိုသာ ရည်ညွှန်းသည်။
8 ။ မတူညီသောရိုက်ကူးမှုများသည် မတူညီသော ပစ်ဇယ်အရေအတွက်ကို ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။
9 ။ ပြင်ပမှ မျက်နှာပြင်အကာအကွယ်သည် လက်ဗွေဆောင်ရွက်ချက်ကို အကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်။ လက်ဗွေအာရုံခံကိရိယာအတွက် စိတ်ကြိုက်ဒီဇိုင်းပါသော vivo တရားဝင်မျက်နှာပြင်အကာအကွယ်ကိုသာ သင် အမြဲတမ်းအသုံးပြုပါ။
10 ။ စာမျက်နှာများတွင် ဖော်ပြထားသော ဖုန်းအပြင်ဘက်ဒီဇိုင်းပုံများနှင့် ထုတ်ကုန်ပုံများသည် ကိုးကားရန် ဖော်ပြထားခြင်းသာ ဖြစ်သည်။ အမှန်တကယ်ထုတ်ကုန်နှင့် ကွဲပြားမှုရှိနိုင်သည်။
11 ။ အချို့သောလုပ်ဆောင်ချက်များကို အသုံးပြုနိုင်ခြင်းသည် နိုင်ငံအလိုက် ကွာခြားမှု ရှိနိုင်သည်။ ပြသထားသည့်ထုတ်ကုန်ပုံများနှင့် အချက်အလက်များသည် ရည်ညွှန်းရန်အတွက်သာဖြစ်ပြီး display screen တွင် ပြထားသောပုံရိပ်များနှင့် သရုပ်ပြရန် ရည်ရွယ်သည်။ အမှန်တကယ်ထုတ်ကုန်များကို စံအဖြစ်ယူပါ။
12 ။ ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူ အပြောင်းအလဲများ (သို့မဟုတ်) ကွဲပြားခြားနားသော ထုတ်လုပ်မှုများကဲ့သို့သော အကြောင်းပြချက်များကြောင့် ထုတ်ကုန်၏ အချို့သောသတ်မှတ်ချက်များ၊ ကိန်းဂဏန်းများ (သို့မဟုတ်) အစိတ်အပိုင်းများကွဲပြားနိုင်သဖြင့် vivo သည် ကြိုတင်အသိပေးခြင်းမရှိဘဲ ဤစာမျက်နှာရှိဖော်ပြချက်များကို ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ဤစာမျက်နှာကို အသုံးမပြုခင် သေချာစွာ ဖတ်ရှုပေးပါ။